Deg Deg: Wararkii ugu dambeeyey qaraxyada caawa ruxay magaalada Nairobi – SBC
Deg Deg: Wararkii ugu dambeeyey qaraxyada caawa ruxay magaalada Nairobi
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya qaraxyo caawa ruxay bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada Kenya kuwaasi oo ka dhacay goob basaska laga raaco.
Qaraxyada ayaa la xaqiijiyey in ilaa iyo haatan ay ku geeriyoodeen lix qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 qof, waxaana ay ka dhacay goob basaska laga raaco oo ku taal wadada loo yaqaan Landhies Road.
Warar laga soo xigtey dhanka Booliiska ayaa sheegay in qaraxyada ahaayeen bambooyinka gacanta laga tuuro kuwaasi oo uu tuuray baabuur xawaare ku socdey oo goobta soo marey, iyadoo ilaa iyo afar qarax la maqlay durbadiisa kuwaasi oo waxyeelo ba’an geystey dad badan oo ku sugnaa goobtaas iyo kuwa kale oo wadada mareyey.
Taliyaha ciidamada Booliiska magaalada Anthony Kibuchi, oo markii qaraxu dhacay ku cararay Isbitaalada la dhigay dhaawaca ayaa xaqiijiyey geerida, wuxuuna sheegay inay socdaan hawlo baaritaan.
Saraakiisha Booliiska waxay kaloo sheegeen inay ka soo xigteen dad goob joogayaal ah in baabuurka qaraxyada ka dambeeyey uu u cararay dhanka xaafada Eastlands ama Islii ee ay ku badan yihiin Soomaalidu.
Kooxaha gurmadka iyo gawaarida dhaawacyada daabula ayaa goobtaasi soo gaaray, waxanaa la xiray wadada qaraxyadu ka dhaceen iyo kuwa kale sababo dhanka amaanka ah.
Afhayeenka Kenyatta National Hospital Simon Itha ayaa sheegay in 9-kii fiidnimo ee caawa Isbitaalkooda la soo gaarsiiyey ugu yaraan 20 qof oo dhaawacyo ah kuwaasi oo qaarkood dhaawacoodu halis yahay.
Qaraxyada ayaa waxay yimaadeen wax yar uun ka dib makrii hadal-hayeenka ciidamada Kenya Colonel Cyrus Oguna uu ku celiyey in Kenya ay ku dambeyn doonto mid u nugul weeraro jawaab u ah hawlgalada Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan.
Shir Jaraa’id oo uu maanta ku qabtey magaalada Nairobi Col Oguna wuxuu sheegay in Al-Shabaab damacsan tahay in qalqal galiso shacabka si dadweynuhu cadaadis u saaraan dawlada, wuxuuna dadweynaha ka codsadey in hadii ay arkaan dad ay ka shakiyaan ay la soo xiriiraan laamaha sirdoonka.
Kuxigeenka afhayeenka Booliiska Kenya Charles Owino wuxuu isaguna geestiisa ugu baaqay dadka reer Kenya inay feejignaan ku jiraan inkastoo uu dadka niyada ugu qaboojiyey in laamaha amaanka ay ku jiraan heegan, iyadoo wali ay sii jirto qatartu.
Weerarkan waa kii sadexaad ee noociisa ah oo ka dhaca magaalada Nairobi tan iyo markii ciidamada Kenya ay gudaha u galeen Soomaaliya iyagoo sheegaya in ay la dagaalamaan Al-Shabaab.
Walee qaraxasi cid kale maahe ee waa alshabaab waa tay hada ka horna u hanjabeen dowlada kenya wada shaqayn wacan byy